Dabaqyada Gawaarida Guriga ee Coronavirus TOGG's Plan | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB34 SpainDabaqyada Gawaarida Guryaha ee Coronavirus ee TOGG
13 / 02 / 2020 34 Spain, YURUB, DUNIDA, GUUD, WADADA, Headline, baabuurta
coronavirus baabuur maxalliga ah ayaa loo rogayaa hoos
Coronavirus, oo ka bilaabatay Shiinaha oo ka walaacsan adduunka oo dhan, ayaa sidoo kale si qoto dheer u saameeyay dhaqaalaha. In kasta oo shirkado badani joojiyeen wax soo saarkii Shiinaha, moobiilkii Mobile World Congress ayaa la kansalay. Joojinta shirweynaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay qorshooyinka TOGG.
Ururka Caalamiga ah ee GSM-ka (GSMA) waxaa baajiyay Shirweynihii Mobilka Adduunka (MWC), kaas oo la qorsheeyay in lagu qabto magaalada Barcelona, ​​Spain bisha Febraayo 24-27, laakiin ku dhawaad ​​19 shirkadood oo tikniyoolajiyada mobilada ah ayaa go'aansaday inaysan ka qeybgalin sababta oo ah nooca cusub ee coronavirus (Kovid-40). ku dhawaaqay inay ahayd.
Qoraal qoraal ah oo ka soo baxay GSMA, waxaa lagu caddeeyey in ururka aan la qaban karin maxaa yeelay dowladda Spain waxay go’aansatay inay ka baxdo carwada, in kasta oo baaqa dowladda Spain ay ku sheegtay “inaysan jirin sababo caafimaad oo la baajiyo”.
Isagoo sheegaya in aysan "macquul aheyn" in la qabto shirweynaha xaaladda hadda jirta, waxaa lagu nuuxnuuxsaday "in xaaladda la xiriirta nooca cusub ee coronavirus si dhakhso ah isu beddeleyso".
Sababtoo ah dillaaca Kovid-19, qaar ka mid ah 40 shirkadood oo ay ka mid yihiin LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, McAfee, Facebook iyo Cisco, waxay go'aansadeen inaysan ku biirin MWC.
mwc'y sanad kasta ka soo Turkey ayaa lagu qaato kaalin aad u daran. Turkey ayaa Initiative Group Baabuurta (TOGG) soo saaray automakers gudaha ee Europe ayaa sidoo kale envisions hordhaca ah ee cadaalad ee sanadkan. Coronavirus sidoo kale wuxuu tuuray dhacdada ay qorshaysatay TOGG.
tareenada xawaaraha ee Shiinaha ayaa hoos u 24 8 saacadood saacad jidka masago Turkiga
Safarkii dheeraa ee mashiinka tareenada ee weyni wuxuu ka yaabiyay kuwii arkay (Sawir Sawir ah - Video)
3. Buundada kor u kaca qiimaha degaanka ee gobollada qaarkood (Video)
India Iron Iron Ore Ganacsi Lacageed Lacagta Yar.
Midka ugu horreeya ee miraha ka shaqeeya Lake Van ayaa la bilaabi doonaa bisha Juun
Miyuu Tareenka Bayburt ku dhacay biyo?
Ururka GSM World
Shirka World Mobile
Hordhaca Yurub ee gaariga guriga